Maxaa Cusub – Page 45 – Shabakadda Amiirnuur
Xoogag hubeysan ayaa markale gudaha degmada Dharkeynleey ee magaalada Muqdisho ku dilay mid kamida ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya. Wararka laga helayo Dharkeynleey ayaa sheegaya in rag hubeysan ay toogasho ku dileen Sarkaal magaciisa lagusoo gaabiyay Xasan Guuleed, Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkan salkaalka lagu dilay. Dhinaca kale warar […]
Shisheeyaha Oo wiil yar ku dilay degmada Baraawe.
Degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha hoose waxaa ka dhacay fal naxdin leh, oo gilgiley dadka ku nool halkaas. Gaari dagaal oo ay wateen ciidamada Shisheeyaha ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa uu bartamaha Baraawe ku jiiray wiil yar oo kamid ah dadaka degmada Baraawe. Durba wiilka yar ayaa goobta ku […]
Saraakiil ka tirsanaa Ciidamada Nabad Sugidda dowladda oo Shibis lagu dilay.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar hubeysan oo caawa ka dhacay mid kamida xaafadaha magaalada Muqdisho oo ay si aad ah ugu xoogantahay dowladda Federaalka Soomaaliya. Rag hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa gudaha degmada Shibis ku dilay laba sarkaal oo katirsanaa Nabad Sugidda dowladda, ilo wareedyo ayaa […]
Ciidamada Uganda Ee Soomaaliya Jooga oo Ka Cabanaya Mushaar La’aan.
Ciidamada Uganda ee qeybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka Soomaaliya oo ay DF-ka ugu yeerto iney nabad ilaaliyaal yihiin, dowladdoodana ku sheegto iney yihiin ciidanka Difaaca Uganda “UPDF” ayaa ka qeyla dhaamiyay mushaar la’aan waqti dheer ah. Wargeyska kasoo baxay dalkaas ee New Vision oo soo xiganaya saraakiil ka […]
Askar Ka Tirsan Ciidanka Jubbaland oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Weerar Ka Dhacay Duleedka Kismaayo.
Xarakada Al-Shabaab oo dagaal kula jirtay ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay iyo maamullada ku daaban ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar ka geysatay tuulo dhacday duleedka magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku beegsatay askar ka tirsan kuwa Jubbaland. Wararka naga soo gaaraya tuulada Qaamqaam ee duleedka Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in […]